USB Port တွေ Permit ပိတ်ခြင်း
Home » ဆော့ဝဲလ် » USB Port တွေ Permit ပိတ်ခြင်း
Posted by maung lay Wednesday, September 19, 20120comments
တနေ့သ၌ ကျွန်ုပ်ထံသို့ မိတ်ဆွေကျော် ကိုလင်းမောင် တစ်ဦး ရောက်ရှိလာလေပြီး ၎င်း၏ ကွန်ပျူတာသည် ဗိုင်းရပ်အန္တရာယ်ကို အမြဲကြုံတွေ့ရကြောင်း၊ ဗိုင်းရပ် ရှင်းပြီးလျှင်လည်း သားငယ်သမီးငယ်များ၏ USB Stick တွင် ပါလာသော ဗိုင်းရပ်များကြာင့် ကွန်ပျူတာထဲသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြောင်းဖြင့် ငြီးတွားပြောဆိုလေ၏
ကျွန်ုပ်လည်း ဒီလောက် စိတ်မပျက်ပါနဲ့ ကိုလင်းမောင်။ USB Stick ကြောင့် ဗိုင်းရပ်ဝင်တယ်ဆိုရင် USB ပေါက်တွေကို ပိတ်လိုက်ပေါ့။ ဒါဆို ၀င်စရာအပေါက် မရှိတော့ဘူးပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလားဟု ပြောဆိုလေသည်။
ကိုလင်းမောင် တစ်ယောက် ခေါင်းကုတ်လျက် မနောက်ပါနဲ့ ကိုမင်းလွင်ရယ်။ အပေါက်ကို တိတ်နဲ့ပိတ်ရုံနဲ့ ရမလား။
ဟား . . . ဟား . . . ကျွန်ုပ်က တိတ်နဲ့ ပိတ်ပါလို့ မဆိုပါလား။ ကဲ ရော့ ဒီဆော့ဝဲလ်လေး ယူသွား။ USB Port Lock က ခင်ဗျားစက်မှာ ရှိနေတဲ့ USB အပေါက်တွေကို ပိတ်ပေးလိမ့်မယ်။ အယ် ဒီလိုဆိုလို့ Mouse တို့ Keyboard တို့ တပ်ထားတဲ့ USB ပေါက်တွေကတော့ သူ့ဟာသူ အလုပ်လုပ်နေ လိမ့်မယ်။ ရှေ့တွေ နောက်တွေမှာ ရှိတဲ့ USB ပေါက်တွေ Permit ပိတ်နေလိမ့်မယ်။
ဒါဆို ကျွန်တော့် သားသမီးတွေ Stick သုံးရင် ကျွန်တော့်စက်မှာ အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့။ ဒါဆို သုံးနည်းလေးတော့ ချီးမြှင့်ပါအုံးဟုမေးလေသည်။
သုံးနည်းကတော့ USB Port Locked Not WithaPassword ကတော့ Password နဲ့ သုံးတာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ကို ဖွင့်လိုက်ရုံပဲ။ Install လုပ်စရာ မလိုဘူး။ ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Lock USB Ports ကို နှိပ်လိုက်။ ပြီးရင် Ok ကို နှိပ်။ Exit လုပ်လိုက်။ ဒါပဲ။
Password နဲ့ သုံးချင်ရင်တော့ USB Port Locked With Password ကိုသုံး။ Password ကတော့ Unlock ဖြစ်တယ်။ U အကြီးဆိုတာ သတိတော့ထားအုံးဟု ဖြေကြားလေ၏။
ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ကြိုက်သွားပြီး အရှုပ်အရှင်းလဲ မဟုတ်ဘူး။ ရှင်းရှင်းလေး သုံးလို့ရတယ်။ ဒါနဲ့ ဒါက Free လားဗျ ဟု မေးလေရာ ကျွန်ုပ်လည်း အောင်မြင်သူ မျက်နှာမျိုးဖြင့် ပြုံးပြုံးကြီး ခေါင်းညိတ်လိုက်လေ၏။